Fahasamihafana eo amin'ny Nap sy ny Torimaso | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany Fahasamihafana eo amin'ny Nap sy ny Torimaso | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany
Trano / fiteny / teny / fahasamihafana eo amin'ny Nap sy ny torimaso
23 Jona 2011 Narotsak'i koshal
Nap vs Torimaso
Misy fahasamihafana kely eo anelanelan'ny torimaso sy ny torimaso na dia manjavozavo ho teny mampita ny dikany mitovy aza izy ireo. Impiry ianao no nisy nilaza fa natory fotsiny? Na hoe tsy afaka mamaly telefaona na tsy maheno ny telefaonan'ny telefaona matory izy ireo? Tsy mampiseho ve izany fa misy mahasamihafa ny teny roa hoe torimaso sy torimaso? Tsy maintsy nieritreritra momba ny fahasamihafana ianao. Izany no antony ifantohan'ity lahatsoratra ity amin'ny fanazavana ny tsy fitovizan'ny torimaso sy ny torimaso. Raha vantany vao namaky tanteraka ny lahatsoratra ianao dia ho afaka mampiasa ireo teny roa natory sy natory mety.
Inona no dikan'ny Nap?
Ny teny hoe nap dia ampiasaina amin'ny hevitry ny 'torimaso maivana na fohy' toy ireo fehezanteny nomena eto ambany:
Natory i Filipo ny tolakandro.
Tiako ny matory kely amin'ny tolakandro.
Amin'ireo fehezanteny roa voalaza etsy ambony, dia azonao atao ny mahita fa ny teny nap dia ampiasaina amin'ny anarana ary ampiasaina amin'ny hevitry ny 'torimaso maivana na vetivety'. Ny dikan'ilay fehezan-teny voalohany dia ny hoe 'Natory somary natory tolak'andro i Filipo'. Ny dikan'ilay fehezan-teny faharoa dia ny hoe: 'Te hatory vetivety aho amin'ny tolakandro.'
Mahaliana ny manamarika fa ny anarana nap dia matetika nialohavan'ilay fitenenana hoe "take" ary ny andianteny dia "take a nap". Ny teny nap dia tsy takatra amin'ny hevitry ny torimaso matotra. Zava-dehibe ny manamarika fa ny saina sy ny vatana dia tsy miala sasatra amin'ny toe-javatra tsy miasa raha sendra torimaso. Ny saina mazàna dia mamaly ny feo sy ny fikorontanana hafa raha sendra torimaso.
Inona no dikan'ny Torimaso?
Etsy an-danin'izany, ny teny hoe torimaso dia ampiasaina amin'ny heviny latsaka ao anaty tsy fandehanana noho ny havizanana sy ny asa mafy. Ny tsy fahavitrihana dia mifandraika amin'ny rafi-pitatitra ao amin'ny vatana. Samy mandry amin'ny torimaso ny vatana sy ny saina. Io no tena mampiavaka ny teny roa, ny torimaso sy ny torimaso. Tsy toy ny amin'ny torimaso torimaso, mandritra ny torimaso ny saina dia tsy mamaly tanteraka ny feo sy ny fikorontanana hafa. Io ihany koa ny fahasamihafana lehibe eo amin'ny teny roa, dia ny torimaso sy torimaso.
Inona no mahasamihafa an'i Nap sy ny Torimaso?
• Ny teny hoe nap dia ampiasaina amin'ny hevitry ny 'torimaso malefaka na vetivety.'
• Ny anarana nap dia matetika nialohavan'ilay fitenenana hoe 'take' ary ny andianteny dia mety hoe 'maka hatory'.
• Ny teny hoe nap dia tsy takatra amin'ny hevitry ny torimaso matotra.
• Etsy an-danin'izany, ny teny hoe torimaso dia ampiasaina amin'ny heviny latsaka ao anaty tsy fandehanana noho ny havizanana sy ny asa mafy.
• Samy matory amin'ny torimaso ny vatana sy ny saina. Io no mahasamihafa indrindra ireo teny roa ireo.
• Na ny saina na ny vatana dia tsy miala sasatra amin'ny toe-javatra tsy miasa raha sendra torimaso.
• Ny saina dia mazàna mamaly ny feo sy ny fikorontanana hafa raha sendra torimaso.
• Etsy ankilany, mandritra ny torimaso ny saina dia tsy mandray andraikitra loatra amin'ny feo sy fikorontanana hafa. Io no fahasamihafana lehibe iray hafa eo amin'ny teny roa, dia ny torimaso sy torimaso.
Ity fahasamihafana ity dia tokony ho fantatra mba hialana amin'ny karazana fikorontanana eo amin'ny teny roa, ny torimaso ary ny torimaso.
Fahasamihafana eo amin'ny zava-misy sy ny porofo Fahasamihafana eo amin'i Said sy ny voalaza Fahasamihafana eo amin'ny poizina sy ny poizina Fahasamihafana eo amin'ny firaisana sy ny ligy Fahasamihafana eo amin'ny trangan-javatra sy ny hetsika
Filed Under: Words Tagged With: torimaso , torimaso ary torimaso , famaritana torimaso, dikan'ny torimaso , torimaso midika , Torimaso , famaritana torimaso, dikan'ny torimaso , dikan'ny torimaso
Fahasamihafana eo amin'ny Endopeptidase sy Exopeptidase
Fahasamihafana eo amin'ny Chrome sy Chromium
Fahasamihafana eo amin'ny adihevitra momba ny ady hevitra sy ny vondrona
Fahasamihafana eo amin'ny HTC Cha Cha sy Sony Ericsson txt
Fahasamihafana eo amin'ny angovo maimaim-poana sy ny enthalpy